Toyota Crown Royal Saloon 2006 (#540176) ကို Ahlone မြို့... | CarsDB
2017-05-21 09:45:33 +0630
836 total views,
2006 Toyota Crown Royalsaloon G, 90000+km, auction grade4ဖြင့်ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းထားသောကား။ နံပါတ်လှ7သိန်းဖြင့်ဝယ်ထား, Original TV with HDD, premium sound system, ထိုင်ခုံအားလုံးမော်တာဖြစ်၊ နောက်, ဘေးဘယ် ညာ နေကာယင်းလိပ်, တာယာလေးလုံးအသစ်ဆက်ဆက်။ အအေးဘူးပါ၊ Aircon နောက်ခန်းပါ။ တစ်စီးလုံးအော်ဆေး၊ အတိုက်အခိုက် လုံးဝမရှိ။ ကားကြောင့်မပျက်ပါ။ ၄၆၅ သိန်း, 465 lakhs. 0973237777, 095413862.
Lot Number: #540176